Kedụ ihe na-enyere bloating ngwa ngwa? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Anti bloating - esi edozi
Kedụ ihe na-enyere bloating ngwa ngwa?
Ndị angwa ngwaAtụmatụ nwere ike inyere ndị mmadụ aka inwetakpochapunke abloatedafọngwa ngwa:
Gbalịa mee yoga.
Jiri pepemps pepemint.
Gbalịa ikpu enyemaka gas.
Gbalịa ịhịa aka n'ahụ abdominal.
Jiri mmanu di nkpa.
Were mmiri saa ahụ warmara ,ara ,ara, soụọ mmiri, zuo ike.
Kedu ihe na-akpata gas? Gịnị ga-enyere aka tufuo ya? Oleekwa mgbe ị ga-agwa dọkịta gị okwu? Aga m agwa gị ihe niile a na ndị ọzọ n’isiokwu n’izu a. Ugbu a, anyị niile maara mmetụta nke njuju mgbe afọ gị na-afụ ụfụ, gbatịa ma ọ na-adịkarị mma. Ọrịa na-emekarị mgbe nnukwu nri izu ụka gachaa, ọkachasị n'oge ezumike, mana ọ bụrụ na enweghi nsogbu mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ dọkịta gị, ka o wee nwee ike nyochaa nke a.
Otú ọ dị, ozi ọma ahụ bụ na ọ bụrụ na bloating bụ nanị ihe nfụkasị oge ụfọdụ, enwere ọtụtụ ihe ị ga - eme iji gbochie ya. Ọzọkwa, anyị na-eche na enwere ike ibute gas site n'ọtụtụ ihe dị iche iche, dị ka afọ ntachi, oke ifufe, ekweghị ibe nọrọ nri, ilo ihe, ikuku, ọrịa celiac, na ọbụna ọrịa afọ bowel na-ewe iwe, na nri ụfọdụ nwere ike ime ka ikuku anyị dị elu ma kpatara gas, dị ka agwa, eyịm, epulite, broccoli, kọlịflawa na ca ahịhịa na-abawanye ihe a niile wee gbalịa isi nri ndị a ma gbalịa ị nweta mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ise kwa ụbọchị ka m wee hapụ njikọ bara uru n'ezie na nkọwa dị n'okpuru nke kwesịrị enyere gị aka na nzọụkwụ ọzọ a. Ugbu a amaara m na ikuku na-ebelata ọ na-ada ụda dị iche mana ọ nwere ike ime ka gas ka njọ ma site n'ụzọ ahụ, ilo ikuku apụtaghị ime nke ahụ n'ihi na ọ dịghị onye na-eme nke ahụ, nke bụ eziokwu bụ na anyị niile na-eloda ikuku na ọ na-abụkarị mgbe anyị na-eri nri, yabụ enwere ihe ndị ị ga - eme iji nyere aka belata nke a, dịka ịghara iri nri n'otu oge, izere ịda ada, izere ịnọdụ ala, izere ihe ọ carbonụ carbonụ carbonated na ịta ọnụ gị mgbe ị na-ata chịngọm, mana ejiri m n'aka na ị na-eme ihe anyị n'ihu Ntachi nke nri Ugbu a gas nwere ike ịzụlite ma ọ bụrụ na eriri afọ gị adịghị edozi nke ọma na nri na-ewepụta gas dị ukwuu, nke tọrọ atọ Ndị na-eme ihe ọjọọ ugbu a bụ ọka wit ma ọ bụ gluten na mmiri ara ehi, mana anyị niile dị iche na ndụmọdụ kacha mma m nwere ike inye ị kwesịrị ịdekọ ihe edere maka izu ole na ole dee ihe niile banyere ihe ị ga-eri mgbe gas gị dị njọ ma gbalịa ịchọta njikọ ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere anagide nri ma ọ bụ hụ njikọ wee malite iri obere ma ọ bụ hapụ ya kpamkpam ma yie ka Agaghị m akwado ka ị belata otu nri kpamkpam, na-ebughị ụzọ gwa dọkịta gị.
M ga-ahapụ njikọ bara uru n'ezie na nkọwa dị n'okpuru ebe a na ozi ndị ọzọ na nke a nke m chere nwere ike inyere aka na afọ ntachi na ọ nwere ike ibute gas ugbu a. Enwere ọtụtụ ihe ị ga - eme iji tufuo ya. Na-a drinkụkwu mmiri, na-eri ọtụtụ eriri, na-emega ahụ.
Emere m isiokwu na nke a n'izu ụka ole na ole gara aga nwere ọtụtụ ndụmọdụ na ozi gbasara otu esi eme nke a. Ọ bụrụ na ị na-afọ ntachi, m ga-akwado gị ka ị lelee ya. ala nke nkọwa dị n'okpuru ebe a dị ka nke na-esote anyị nwere ọrịa celiac na gas, ya mere ọrịa celiac bụ ọrịa na-agbari nri nke eriri afọ na-enweghị ike ịmịcha ọka wit na ọka bali na rye.
Mgbe ị na-eri nri nwere gluten, ọ na-ebute gas, afọ ọsịsa, na ọbụna ike ọgwụgwụ. Ọrịa Celiac na-emetụta 1 onye na 100 mmadụ nọ na United Kingdom ugbu a You nwere ike ịgwa dọkịta gị, onye gwara gị na ha nwere ike ileba anya na nke a. I nwekwara ike gbalịa igbanye na nri na-enweghị nri gluten ma hụ ma enwere uru ọ bụla.
Ahapụkwara m ozi ndị ọzọ na nkọwa dị n'okpuru ebe ụfọdụ nwere njikọ bara uru n'ezie ma n'ikpeazụ anyị nwere Ọrịa Bowel Na-adịghị Mma ugbu a ndị nwere IBS na-enwekarị mgbede mgbede na ihe kpatara ha ji enweta gas anaghị enwekarị oke ikuku, mana karịa n'ihi oge ụfọdụ eriri afọ na-agagharị ugbu a Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe gbasara IBS, ahapụwo m ọtụtụ ihe na nkọwa dị n'okpuru ebe a maka gị, nke ahụ bụ njedebe nke isiokwu a n'izu a karịa nsogbu ahụ mgbe ụfọdụ, biko gwa dọkịta gị ka o nwee ike nyochaa ọzọ ma wepụ ya. ihe ọ bụla ka njọ. Ntughari nri onyunyo Celiac Disease constipation (LAUGH) Nke ahụ siri ike dịka ọmụmaatụ Beans Onion Cauliflower Sprouts Cauliflower (LAUGH) Hey ụmụ okorobịa, ekele maka ikiri isiokwu nke izu a
Olee otú m Debloat m afo?
Site na nri kacha mma ị ga-eri iji belata gas na ọrụ ọhụrụ iji gbalịa, echiche ndị a ga-eme ka mgbaze gị laghachi na egwu ngwa ngwa o kwere mee.
Rie nri nwere potassium.
Gbalịa dandelion mgbọrọgwụ tii.
Were nnu nnu nke Epsom.
Pụọ na gị ụfụfụ ala.
Tụlee ị takingụ ọgwụ ọgwụ magnesium.
Kedu ihe kachasị mma maka bloating?
Gbalịa Anti-IkupuIhe oriri na ihe ọ Dụ Dụ. A ole na ole ọmụmụ na-egosi na pepemint tii, ginger, painiapulu, pasili, na yogurts nwere probiotics ('ezi'bacteria) nwere ike inye aka belatana-agbapụ.
Gịnị bụ mgbochi bloating oriri?
iri abụọIhe oririna Mmanya Na-enyere AkaIkupu
Avocados. Avocados na-edozi ahụ nke ukwuu, na-etinye ezigbo ego nke folate na vitamin C na K n'ime ọrụ ọ bụla (2).
Kukumba. Cucumbers nwere ihe dị ka 95% mmiri, na-eme ka ọ dị mma iji belatana-agbapụ(5).
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii.
Kedu ka m ga - esi kpochapu bloating na 5 nkeji?
Gbalịa ya nke mbụ: Cardio
Ma ije ije mara mma, njem jogburu onwe ya, ịgba ịnyịnya ígwè, ma ọ bụ ọbụlagodu na elliptical, cardio ga-enyere aka kọwaa gịelu mmiri. Mmega ahụ dịka nke a ga - enyere aka ịchụpụ gas nke na - akpata ihe mgbu ma nyere aka mee ka nri gbarie.Eprel 23, 2018
Mmiri ọ drinkingụụ ọ na-enyere aka na bloating?
“Ọ bụ ezie na ọ pụrụ iyi ihe na-enweghị isi,mmiri ọ drinkingụ .ụnwere ikeEnyemakakabelata bloatsite na ikpochapu oke sodium, ”Fullenweider na-ekwu. Ndụmọdụ ọzọ: Jide n'akaụọ ihe ọ .ụ .ụọtụtụmmiritupu nri gị. Nzọụkwụ a na-enye otu ihe ahụelu mmiri-metụta mmetụta nanwere ikegbochie oke iri nri, dị ka Malọ Ọgwụ Mayo.Ọnwa iri 17, 2020
Mmiri lemon ọ na-enyere aka na bloating?
Dị ka ego,oroma nkịrịsịihe ọ .ụ juiceụna-enyere akaịtọghe toxins na-ese n'elu mmiri na mpaghara GI gị,enyemakamgbaàmà na-egbu mgbu nke na-eso afọ mgbu, na ọbụnabelataihe ize ndụ nke ịkụ nana-agbapụnke sitere na ịmịpụta gas n'ime eriri afọ gị.Mmiri Lemọnnwere ike na-gị digestive usoro purring dị ka a kitty ogologo ụbọchị dum.Ọkt 1, 2018
Ogologo oge ole ka bloating ga-adịru?
Na mkpokọta, ọ bụrụ na ha na-emega ahụ ma ọ bụ na usoro nsị ha na-arụ ọrụ nke ọma,bloating nwere ikelara ihe na-erughị otu izu. N'ihe banyere mmanya na-egbu egbu (mbufụt n'ime eriri afọ),bloating nwere ikena-apụ n'anya n'okpuru izu 2.Ọnwa Iri 11, 2020
Ogologo oge ole ka bloating ga-adịgide?
Mmiri ọ drinkingụụ ọ na - enyere aka iku ume?
“Ọ bụ ezie na ọ pụrụ iyi ihe na-enweghị isi,mmiri ọ drinkingụ .ụnwere ikeEnyemakakabelata bloatsite na ikpochapu oke sodium, ”Fullenweider na-ekwu. Ndụmọdụ ọzọ: Jide n'akaụọ ihe ọ .ụ .ụọtụtụmmiritupu nri gị. Nzọụkwụ a na-enye otu ihe ahụelu mmiri-metụta mmetụta nanwere ikeỌzọkwagbochieiribiga nri ókè, dị ka Malọ Ọgwụ Mayo.Ọnwa iri 17, 2020
Kedu ihe kpatara ọgwụ mgbochi akpụkpọ ahụ ji adị mma maka afọ?
Nke a bụ ihe mgbochi-asụ ụfụfụ gị n'ụlọnga na-arụ ọrụ iji belata elu erughị ala nke gas egosipụta, si otú na-eme ha ka ha ikpokọta n'ime ibu egosipụta na afo na ike gafere n'ụzọ dị mfe karị. Ọ dị mma ịmara na ọ naghị belata ma ọ bụ gbochie ikuku gas na mpaghara nri; kama, ọ na - eme ka ọnụọgụ ahụ ọ na - apụ apụ n’ahụ.
Olee otú iji tufuo bloating ke afo?
Imirikiti mmadụ na-ahụ bloating n'oge ụfọdụ. Mmega ahụ, mgbakwunye, na ịhịa aka n'ahụ nwere ike inye aka belata ngwa ngwa ngwa ngwa, mgbanwe ndụ dị mfe nwere ike igbochi ya ịmaliteghachi. Ọrịa afọ bụ mgbe afọ na-adị oke ma sie ike. Ọ na - apụtakarị n'ihi ịmịpụta gas n'otu ebe n'ime eriri afọ (GI).
Gịnị kpatara m ji enwe afọ ojuju oge niile?
Bloating na-eme mgbe oke ikuku na-eto n'ime afọ ma ọ bụ eriri afọ. Mgbe bloating na-eme ozugbo nri, ọ na-edozikarị onwe ya, mana ọ na-enwekarị ike ime ka usoro a dị ngwa. Zọ kachasị mma iji gbochie bloating bụ ịchọpụta ihe kpatara ya. Ihe na-akpatakarị maka bloating gụnyere: nsogbu nri.